Yucca Filamentoza: kụrụ na nlekọta, atụmatụ nke mmeputakwa, nsogbu na-eto eto - Mkpụrụ ubi - 2020
Osisi ụgha nke Yucca Filamentoza - shrub nwere okooko osisi mara mma
Yukka Filamentoza (filamentous) - Evergreen shrub na okooko osisi nke siri shades. Anụ ọhịa n'America, "nkwụ akwụ" a na-ewu ewu na ndị na-elekọta ugbo na mpaghara Moscow na Central Russia.
Na Russia, a na-akpọkarị osisi a "Ogige Yucca", n'ihi na ọ dị mma maka ịgha mkpụrụ n'ubi karịa n'ụlọ.
Ala nna na atụmatụ
Osisi ndị dị n'ụdị dị otú a na-eto ma na-amụba. na ala dị iche iche dị na mmiri ma ọ bụ ihu igwe. Ala nna nke yucca filamentous ghọtara na ndịda ọwụwa anyanwụ United States na Mexico.
A na-eji akwụkwọ dị iche iche nke ndị India Indian mee ihe maka akwukwo, mgbọrọgwụ, na mkpụrụ nke shrub. A na-eji ihe nchịkọta osisi mee ihe maka nkwadebe nke ọgwụ ụra na ọgwụ ndị na-eme ka ndị mmadụ kwụsị. A kwadebere mmanu site na mgbọrọgwụ iji nyere aka na sprains na ọnya akpụkpọ anụ.
Mgbọrọgwụ Yuccas nwere saponins - bekee nwere ihe na-arụsi ọrụ ike - nke mere ka ndị India jiri mgbọrọgwụ ncha dị ka ncha.
Na epupụta Ụdị ụdị yucca a nwere ihe ndị dị ike nke na-eme ka e nwee ike iji osisi ahụ mepụta ụdọ eriri. Na United States, a na-etinye ụlọ ọrụ denim-leaf denim na owu.
Vidio a na-akọ banyere Njirimara ọgwụgwọ nke Yukka Filamentoza.
Yucca Filamentoza mma emeziri ka na-eto eto na ebe na-ekpo ọkụ na akọrọ. N'ime ọhịa, a na-ahụ osisi ahụ na ala akọrọ na ájá, a pụrụ ịchọta ya n'okporo ụzọ ụzọ, n'akụkụ ala dị n'ụsọ oké osimiri ma ọ bụ n'elu ọnụ ugwu. Ọ pụkwara itolite na ala nkume.
Yucca filamentous - perennial evergreen shrubnke nwere ogwe ogologo ma ogologo, nke dị n'okpuru ala. Akwụkwọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ogologo 30 ruo 80 cm tolite site na ntaneti.
Doo nnukwu, nke siri ike, ogologo oge, mma agha, a na-atụ aka na nsọtụ, mita 2 ruo 4 n'obosara. Ihe yiri eriri ndị a na-ehicha site n'akụkụ nke epupụta, bụ nke aha nkwụ a nwere aha ya.
Osisi okooko osisi Yucca na-emekarị oge opupu ihe ubi na oge okpomọkụ. Okpokoro ndị a na-agbatị na ụyọkọ sitere na otu mkpụrụ osisi na-eto eto site na rosette. Ogologo pedoncle nwere ike iru 4 mita.
Yucca okooko osisi mara mma filamentoses na-adọta ngwa ngwa: ha na-adị ka mgbịrịgba nke nwere nnukwu oval na okwute corolus nke 5 ruo 8 cm. Ojiji nke okooko osisi na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha odo odo ma ọ bụ greenish.
Mgbe okooko osisi akpọnwụ ma daa, a na-ewepụ ya.
Foto nke okooko osisi Yucca filamentous.
A na-ahụkarị Yucca filamentoza dika osisi ornamental na Russia. Ọ bụ osisi a ma ama maka ịmepụta ihe owuwu uzo mara mmaọ na-ele anya dị mma na ala na ogige ma na-enye lawns na ọgba aghara nke greenery. Akụkụ ndị a ma ama, akwụkwọ ndị a kapịrị ọnụ na nnukwu okooko osisi na-adọta anya.
Dị ka ụlọ osisi, yucca nwere ike itolite n'ime ite, mana ka shrub ga-adị ntakịrị. Osisi oke ohia nke uzo Yucca adighi emeputa.
Osisi ụgha nke Yucca - osisi photophilous. Nke a na osisi shrub nwere oke n'anwu ma ọ bụ na ndò. Mgbe ị na-arụ ọrụ n'ụlọ, ite nke kachasị mma na-etinye n'ime ebe anwụ na-acha.
Ọ bụrụ na enweghi ọkụ, ọkụ yucca filamentous na-enweghị ebe obibi agaghị enwe ọtụtụ akwụkwọ.
A na-atụ aro osisi ndị a kụrụ na oge ọkụ ka ha na-emekarị n'èzí.
Yucca - ịma mma ndịda, na-ahụkarị okpomọkụ na oké ọkọchị. A na-akọ ụdị ụdị yucca dị iche iche na ọnọdụ ihu igwe dịgasị iche iche, na osisi ndị na-akụ n'ubi na-eguzogide ọbụna oge oyi oyi oyi. Ya mere na yucca anaghị efunahụ otu akwukwo, a na-ekpuchi osisi ahụ maka oyi. Udo nkasi obi maka ozuzu yucca n'ụlọ - 18 - 24C.
Ụdị yucca niile adịghị amasị mmiri, ya mere, ọ dịghị mkpa ịchọta ịgbara mmiri. Ala kwesịrị ịnọgide na-adịtụ mmiri.
Ikiri akwụkwọỌ dị mfe ịchọpụta ma achọrọ mmiri ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na a na-edozi akwụkwọ ahụ, na ụdọ ahụ gbagọrọ agbagọ n'akụkụ ọnụ ya ma yiekwa curls, mgbe ahụ osisi ahụ dị mma. Ọ bụrụ na e nwere mpịakọta nke mpempe akwụkwọ ahụ na nchịkọta nke eri, yucca chọrọ ịgbara.
Osisi ndị na-eto eto n'ime ụlọ na-ejikwa mmiri eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Enweghị mmiri kwesịrị itinye na pan - Ọ dị njọ na usoro mgbọrọgwụ, nke na-amalite ịmịkọrọ mmiri na mmiri.
Emeputakwa ihe mkpụrụ na-ekesa, site na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ, ma ọ bụ site na ịgha mkpụrụ mkpọrọgwụ. N'ime ebe obibi ha, mkpụrụ osisi chara chara na igbe ma nwee ike kụọ ya na oghe ala na ahịrị ma ọ bụ enweghị usoro, ruo omimi nke 1-2 cm.
Ọdịdị yucca dị na Russia anaghị amị mkpụrụ, dịka ụmụ ahụhụ na-ekpochapụ ọkụkụ na-adịghị emetụta ebe a.
Emeputara mgbọrọgwụ osisi ndị a rụrụ na mmalite oge opupu ihe ubi. Ọ ka mma ịkewapụ mkpịsị osisi site na mgbọrọgwụ mgbe ala dị ntakịrị mmiri. Maka usoro a, ọ ka mma ịhọrọ oke ohia tozuru oke. Gburugburu ụzọ mgbapụ ahọrọ iji nlezianya gwuo ala, jiri nlezianya hapụ osisi ahụ site na ala ya.
Mgbe o gbusịrị ọtụtụ akụkụ ahụike nke mgbọrọgwụ ahụ, a ga-etinyeghachi osisi ahụ n'ime ala, tamped na mmiri. A na-ebu ụzọ kpochapụ mkpụrụ osisi n'ime ite nke jupụtara n'ọhịa (ọ ka mma ka ị ghara iji ihe oriri dị njikere maka osisi) ma hapụ ebe dị ọkụ. Mgbe germination, a ga-akụ mkpokoro eto eto n'èzí.
Video banyere Yucca Filamentoza: kụrụ na ilekọta, okooko na mmeputakwa.
Ọ gaghị ekwe omume ịchọta osisi na-agaghị emebi emebi site n'ụdị aphids ọ bụla, yucca filamentous abụghịkwa otu. A na-ahụ Tlyuchitku na peduncles na epupụta - a na-ewepụ ihe ndị na-acha uhie uhie na aka, pesticides megide ha enweghị ike.
Kwa ụbọchị A ghaghị edozi akwụkwọ swab tinye n'ime mmiri, na otu ugboro n'izu, ehichapụ ya na ihe ngwọta mmanya.
Akwụkwọ nke yucca filamentosis nwere ike ibute ọrịa na-akpata ọrịa, ya na ihe kpatara ya ihe oyiyi blotch na-egosi. Isi ihe mere - ukwuu atọ na akwa iru mmiri.
Oké mmiri nwere ike ime. ahihia ahihianke ahu bu kwa oria ojoo.
White rot na-ebido na mberede mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ n'okpuru ọnọdụ nke elu iru mmiri ma ọ bụ na ala ala okpomọkụ. Fatịlaịza ọcha nwere ike na-etolite n'elu epupụta na esiwe.
Imegide ụdị dị iche iche nke ero na-enyere aka na-agba ume na ọgwụ ndị na-egbu egbu, na-ewepụ akụkụ nke osisi na akụkụ kwesịrị ekwesị agrotechnology.
Yucca filamentoza bụ ezigbo nhọrọ maka ịmepụta ogige ubi dị irè. Nke a shrub kwadoro ọnọdụ dịgasị iche iche na anaghị achọ nlekọta pụrụ iche.
Na ebe a bụ vidiyo ọzọ banyere evergreen shrub Yucca filamentous.